» उपसभामुखले विवेक प्रयोग गरेर राजीनामा दिनुहुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं :प्रवक्ता श्रेष्ठ
उपसभामुखले विवेक प्रयोग गरेर राजीनामा दिनुहुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं :प्रवक्ता श्रेष्ठ
१ माघ २०७६, बुधबार १८:१८
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेु राजीनामाको विकल्प नरहेको बताएका छन् ।
मुलुकले छिटो सभामुख पाउनु पर्ने उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले यथासिघ्र राजीनामा दिएर निर्वाचनको ढोका खोल्न आग्रहसमेत गरेका छन् ।
उपसभामुखले राजीनामा दिएपछि मात्रै सभामुखमा उम्मेदवारी दिने सुनिश्चितता हुने श्रेष्ठले बताए ।
गृहजिल्ला गोरखा पुगेका श्रेष्ठले बुधबार पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै भने ‘सभामुखको उम्मेद्वार बन्नका लागि उपसभामुख पदबाट राजीनामा निश्चित हो । संविधानको मर्मलाई कानूनको विद्यार्थीसमेत हुनु भएको उपसभामुखले यो कुरा बुझ्नु भएको छ ।’
उपसभामुखले राजीनामा नदिए के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा श्रेष्ठले भने, ‘उहाँले राजीनामा नदिए के हुन्छ ? भन्ने हामीले सोचिसकेका छैन। उहाँले राजीनामा दिनुहुन्न र नदिए के गर्ने भन्ने हामीले सोचेको छैन। उहाँ वौद्धिक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। उहाँले विवेक प्रयोग गरेर राजीनामा दिनुहुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं। उहाँले राजीनामा दिनुहुन्न भन्ने कल्पना पनि गरेका छैनौं।’
उनले सभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फे नै बन्न पनि उपसभामुखबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताउदैसंविधानअनुसार एकै पार्टीबाट सभामुख र उपसभामुख चयन गर्न नमिल्ने भन्दै उनले उपसभामुखले राजीनामा दिनुको विकल्प नरहेको बताए ।
उनले उपसभामुखले राजीनामा नदिएसम्म मुलुकले सभामुख पाउने अवस्था नरहेको उल्लेख गरे।